Ngokuzayo, i-Villa "Millennium" yomoya yaseMoroccan iveza ubhavu wefasitela elibonakalayo esibukweni samafasitela asuka phansi kuya ophahleni umbhede oyindilinga umbhangqwana wase-Haichang Ocean Park ushaya utshani ukuze udubule usaziwayo we-inthanethi ohlala ekhaya. - I-Airbnb
Ngokuzayo, i-Villa "Millennium" yomoya yaseMoroccan iveza ubhavu wefasitela elibonakalayo esibukweni samafasitela asuka phansi kuya ophahleni umbhede oyindilinga umbhangqwana wase-Haichang Ocean Park ushaya utshani ukuze udubule usaziwayo we-inthanethi ohlala ekhaya.
Ikamelo e-i-villa ibungazwe ngu-未时Villa
U-未时Villa Ungumbungazi ovelele
[Chofoza ku-avatar yami ngenhla ukuze ubone zonke izinhlu eziyi-11]
1. Uhlobo lombhede: umbhede oyindilinga ongu-2.0m. Abantu ababili bangaphila.
2. Ezokuthutha: Haichang Ocean Park: Ibanga lingamakhilomitha angaba ngu-5. Kuthatha cishe imizuzu engu-15 ukufika esitolo ngetekisi.Imali yokugibela itekisi isekelwe kumitha yetekisi, okungamayuan angama-20. Isikhumulo sezindiza sasePudong: Ibanga lingamakhilomitha angaba ngu-35. Imali yokugibela itekisi isekelwe kumitha yetekisi, okungamayuan angu-100. Isikhumulo sezindiza sase-Hongqiao: Ibanga lingamakhilomitha angaba ngu-65. Ungathatha indlela ehamba ngaphansi eya e-Dishuihu Station, bese ugibela itekisi ukuze ufike esitolo cishe imizuzu eyi-15. Noma ungathatha itekisi ngqo, cishe imizuzu engama-80, imali yokugibela itekisi isuselwa kumitha yetekisi, cishe ama-yuan angama-300. I-Hongqiao Railway Station: Ibanga lingamakhilomitha angaba ngu-65. Ungathatha indlela ehamba ngaphansi eya e-Dishuihu Station, bese ugibela itekisi ukuze ufike esitolo cishe imizuzu eyi-15. Noma ungathatha itekisi ngqo, cishe imizuzu engama-75, imali yokugibela itekisi isuselwa kumitha yetekisi, cishe ama-yuan angama-300.
3. Egumbini: wokudlala, amanzi heater, air conditioner, yobude obugcwele esibukweni, umculo, internet WiFi, umshini wokomisa izinwele, iketela, Slippers, futhi izinto alahlwayo okugeza izinto alahlwayo ezifana izixubho, amakamu, izinsingo zokushefa ezilahlwayo, njll Sicela contact ideski elingaphambili uma uwadinga).
4. Indawo yokugcina imithwalo: ingagcinwa edeskini elingaphambili
Itholakala ekhoneni eliseningizimu-mpumalanga yeShanghai Pudong New Area, eduze neLingang University Town. Indawo emelene nomphakathi lapho i-B&B itholakala khona yiNew World Plaza (Food and Leisure Plaza).
Kuqhele ngamakhilomitha ayi-5 kuphela ukusuka e-Haichang Ocean Park naseDishuihu Subway Station (imizuzu eyi-15 ngetekisi, cishe ama-yuan angama-20).
I-35km ukusuka ePudong International Airport (imizuzu engama-40 ngemoto, cishe ama-yuan ayi-100).
25km (imizuzu engu-45 ukushayela) ukusuka eSafari Park.
I-36km (imizuzu engama-45 ukushayela) ukusuka e-Disneyland.
Kude ngamakhilomitha angu-65 ukusuka e-Hongqiao Airport kanye nasesiteshini sesitimela. Ungathatha indlela engaphansi eya e-Dishuihu Station, bese ugibela itekisi ukuya ekhaya cishe imizuzu eyi-15. Noma ungathatha itekisi ngqo, cishe imizuzu engama-80, imali yokugibela itekisi isuselwa kumitha yetekisi, cishe ama-yuan angama-300.
Kukhona izindawo zokudlela, izitolo ezinkulu, i-KTV nezinye izindawo zokuzijabulisa ngaphakathi komjikelezo wokuhamba wamamitha ayi-1000.
U未时Villa Ungumbungazi ovelele